भ्वाइस अफ नेपालकी तारा श्रीले गहभरी आँसु पार्दै भन्छिन्: एक मुट्ठी चियुराको भरमा कयौ रात भोक भोकै बसे ! ( भिडियो ) – Dailny NpNews
भ्वाइस अफ नेपालकी तारा श्रीले गहभरी आँसु पार्दै भन्छिन्: एक मुट्ठी चियुराको भरमा कयौ रात भोक भोकै बसे ! ( भिडियो )
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १३, २०७८ समय: १०:३३:२४
काठमाडौ । जीवन राम्रो बनाउन तारा श्री जब काठमाडौ आइन् त्यसपछि उनको संघर्षका दिन सुरु भए । उनी मोडल र गायीका बन्न चाहन्थिन् । तर त्यो चाहना पुरा गर्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । यस्तो जीवन पनि बिताइन् जतिबेला उनले दुई छाक भोक पनि टार्न सक्दिनथिन् । भोकै बसेका धेरै दिन अहिले सम्झँदा पनि उनका आँखा रसाउँछन् । उनी अहिले पनि अविवाहित छन् । अब भने उनी आफुलाई र आफ्नो कामलाई बुझ्ने र माया गर्ने जीवन साथीको खोजीमा छन् ।
उनी वाहिरी आवरणको सुन्दरता हेर्दिनन् । तर मन र भावना तथा आफ्नो कामलाई सम्मान गर्ने जीवनसाथी उनको रोजाईमा पर्छन । उनी आफ्नो जीवनमा साहस दिने आमाबुवालाई भगवान समान मान्छिन् । दिनुहँको भोक मेटाउन दोहोरीमा पनि पुगिन् । उनी भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ को उपविजेता बनेपछि अहिले उनी अलि बढी चर्चामा आइन् । त्यस अघिका दिन उनका लागि संघर्षपूर्ण रहे ।
उनी निकै सरल रहेको उनीसंग संगत गर्नेहरु भन्छन् । अहिले भने उनी निकै ब्यस्त छन् । गीतहरु गाउने र भ्वाइस अफ नेपालमा रहँदा भेट्न नपाएकाहरुलाई समय दिन थालेकी छन् । परिवार निकै निम्नस्थरको त होइन ।
आफै केही गर्छु भनेर काठमाडौ आइसकेका कारण उनले घरमा कसैलाई आफुलाई आर्थिक समस्या परेको कुरा पनि भन्न सकिनन् । त्यसैले कैयौं रात भोकै बस्नुपरेको उनको भनाई छ । पछि साथीहरु बनाउँदै गएपछि भने उनलाई केही सजिलो भयो । दोहोरी साँझमा गाउन थालेपछि उनलाई सजिलो महशुष भएको उनको भनाई छ ।